Gabadh qoraa ah oo qiratay in ay u geftay Priyanka Chopra - BBC News Somali
Image caption Ms Chopra iyo Mr Jonas oo xaflad aroos oo kale ku dhiganaya magaalada Udaipur
Wariye Maraykan ah ayaa raaligalin bixisay kadib markii ay qortay in gabadha jilaaga ah, Priyanka Chopra ee u shaqaysa sharikadda filimada samaysa ee Bollywood ay tahay "Atarisho danaysato ah" taas oo qool ku ridatay heesaaga Maraykanka ah ee Nick Jonas si ay ugu dangaarto oo ay shaqadeeda usii wadato.
Mariah Smith ayaa tiri waxaan dhabarka u ritay "masuuliyadda wixii aan qoray, Waan khaldanaa, dhab ahaantiina waan ka xumahay".
Qoraalka oo lagu daabacay wargays lagu magacaabo The Cut, oo kasoo baxa magaalada New Yor, ayaa laga saaray halkaas.
Si kastaba ha ahaatee Ms Smith ayaa sheegtay in aanay aqbalayn " midab kala sooc, ajaanib nacayb iyo faquuq dhanka galmada ah toona".
Ms Chopra iyo Mr Jonas ayaa ku aqal galay toddobaadkii hore magaalada Jodhpur ee kutaal gobolka Waqooyiga Galbeed ee dalka Hindiya kuyaal ee Rajasthan.
Dhaleeceyntii guurka Priyanka Chopra oo taageero isu badeshay saacado gudahood
Image caption Priyanka Chopra iyo Nick Jonas
Dadka reer Hindiya ee adeegsadaga baraha bulshada ayaa aad u difaacay go'aanka Priyanka Chopra ee ah in ay guursato fannaanka u dhashay Mareykanka ee Nick Jonas, kadib markii bog intarnet oo laga leeyahay dalka Mareykanka uu Priyanka ku tilmaamay '' daneysato'' doonaysa inay ku dan gaarto Nick Jonas.
Maqaalka oo lagu daabacay bogga intarnetka ee The Cut ayaa waxaa ka dhalatay caro aad u ballaaran. Dad badan oo reer Hindiya ah oo aan markii hore la dhacsaneyn guurka labadan lamaane ayaa haatan u weecday difaacidda Priyanka Chopra.
Qaar badan oo kamid ah dadkaasi ayaa maqaalkaasi ku tilmaamay mid cunsurinimo ay ku dheehantahay.
Soo ifbixidda maqaalkan ayaa baddelay hadal heyntii dhowrka maalin ka taagneyd dalkaasi oo aheyd in arooska Priyanka iyo Nick laga badbadiyay.
Hasa yeeshee arrinkaasi ayaa haatan u muuqda mid meesha ka baxay oo waxa dadka inta badan ay noqdeen kuwa Priyanka ka difaaca warbixinta laga qoray.
Markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Priyanka Chopra iyo Nick Jonas ay aqal galayaan, dad badan waxba kama aysan ogeyn qofka uu yahay Nick Jonas, waxaase maqaalkan uu waxbadan ka baddelay fikirkii laga aaminsanaa.
Atariisho caan ah oo dhigatay aroos mar la arag ah
Maqaalka bogga The Cut oo la daabacay saddex cisho uun kadib aqal galka labadan lamaane ayaa sidoo kale lagu sheegay in Nick Jonas uusan ku qanacsaneyn guurka, balse Priyanka Chopra ay ku khasabtay.
Inkastoo caro baahsan ay ka dhalatay maqaalkaasi ayaa hadana boggaasi waxaa uu ku khasbanaaday in ay meesha ka saaraan warbixinta oo dhan.
Arrintan ayaa waxaa si caro leh uga hadlay jilayaal badan oo caan, kuwaasi oo ay kamid yihiin jilayaasha reer Hindiya ee Sonam Kapoor iyo nin ay walaalo yihiin Nick Jonas oo lagu magacaabo Joe Jonas .
Priyanka Chopra ayaa iyadu na mar wax laga weydiiyay maqaalkan laga qoray waxaa ay sheegtay in aysan iminka dooneyn inay ka hadasho arrintan oo xili farxadeed ay ku jirto.
Priyanka Chopra oo 36 jir ah, caan na ku ah aflaanta Hindiga iyo Nick Jonas oo 26 jir heesa ah, una dhashay Mareykanka ayaa ku aqal galay dalka Hindiya.